Ny endri-tsoratra GNOME dia manatsara ny fanohanana emojis bebe kokoa | ubunlog
Ny endri-tsoratra GNOME dia hanatsara ny fanohanany emojis, ary nampiditra fampiharana vaovao tamin'ity herinandro ity
pablinux | 07/05/2022 11:38 | Nohavaozina amin'ny 07/05/2022 11:40 | GNOME, Ubuntu
Ny faran'ny herinandro indray izao, ary midika izany fa ny roa amin'ireo desktop be mpampiasa indrindra amin'ny Linux dia namoaka naoty momba ny vaovao tonga na efa ho tonga. Ny voalohany nanao izany, omaly hariva tany Espaina, dia GNOME, izay nanomboka ny lahatsorany tamin'ny herinandron'ny 29 Aprily ka hatramin'ny 6 Mey tamin'ny firesahana momba ny Characters. Ity fampiharana ity dia fampiharana ofisialy ahafahantsika mahita sy mizara emojis.
Ny kinà farany farany an'ny Ny endri-tsoratra izao dia manohana emojis mitambatra, izany hoe raha misy manana lokon-koditra samihafa, dia afaka misafidy izay mifanaraka amin'ny filantsika isika izao. Ary koa, saina bebe kokoa no nampidirina, ary nalamina araka ny tokony ho izy ireo kisary, fa tsy amin'ny laharan'ny kaody. Vaovao sisa hoy izy ireo omaly dia toy izao :
Dika vaovaon'ny Apostrophe, tonian-dahatsoratra misy marika, izay ahitsy ny lesoka sasany ary misy fanatsarana vitsivitsy nampiana, toy ny fandikan-teny nohavaozina. Mandeha ihany koa ny asa amin'ny fitondrana azy amin'ny GRK4.
Navoaka ny kinova voalohany an'ny Geopard, mpanjifa gemini tsotra sy maro loko. Azo alaina avy amin'ny Flathub.
Ny fampiharana vaovao iray hafa dia ny Citations, mpitantana vaovao ho an'ny references BibTeX. Fampiharana kely hitantana ny bibliographie-nay sy hanamora ny fanaovana kopia ny citation avy amin'ny LaTeX mankany amin'ny endrika hafa. Efa eo am-pandrosoana tanteraka ny Citations, saingy misy version stable ao Flathub.
Nampiditra OS-Installer izy ireo, installer generic izay azo amboarina amin'ny alàlan'ny fizarana mba hametrahana rafitra fiasana.
Workbench dia nampiditra tranomboky vaovao misy ny mpanjifa WebSocket, Toast, Application Windows ary fampandrenesana desktop. Ary anisan'ny vaovao hafa:
Afaka mirodana ny console amin'ny fanovana ny habeny.
Manakana ny system.exit tsy hanidy ny Workbench.
Avelao hiantso imbetsaka ny GObject.registerClass.
Fadio ny fianjerana rehefa mampiasa zavatra tsy GtkBuildable.
Mamela ny fampiasana DBus sy Gio.Application.
Mamela ny fampiasana ny tambajotra.
Mamela ny fijerena ny zavatra GtkWindow.
Fanatsarana ny famolavolana.
Ary izany, miaraka amin'ny filazana ny Linux App Summit farany, dia tamin'ity herinandro ity tao amin'ny GNOME.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » GNOME » Ny endri-tsoratra GNOME dia hanatsara ny fanohanany emojis, ary nampiditra fampiharana vaovao tamin'ity herinandro ity